Telefoonada ugu fiican ee Android: tijaabooyinka, bilaabista, xanta ... | Androidsis (Bogga 25)
LG G6 Vs LG G5, faraqa ayaa muuqda !!
Isbarbardhiggan LG G6 Vs LG G5, isbarbardhig ay farqiga weyn u muuqdo, waxaan waji ka waji u kala saarnay labada calan ee LG.
Ulefone T3, calanka Ulefone ee soo socda ayaa kugula yaabi doona qalabkiisa xoogga badan
Ulefone waxay xaqiijisay qaar ka mid ah xogteeda Ulefone T3, kuwaas oo ka mid ah kuwa ka dhex muuqda qalabka awooda badan ee qalabku leeyahay
Sony Xperia XZ Premium, kuwani waa astaamaheeda
Sony waxay ku soo bandhigtay Sony Xperia XZ Premium cusub MWC 2017 waxayna la yaabtay dhowr astaamo cusub oo shaashadda, kamarad iyo awood ah.
OnePlus 5, wararka xanta ah ee Shiinaha weyn
Xanta cusub ee ku saabsan OnePlus 5, casriga casriga ah ee ka socda shirkadda Shiinaha ee OnePlus oo dooneysa inay la tartanto Samsung Galaxy S7 Edge oo leh shaashad qaloocan.
Cusbooneysiinta Android 7 ee Samsung Galaxy S7 ayaa durbaba soo gaadhay Spain, inkasta oo xilligan kaliya loo marayo terminaalka Orange
Cusbooneysiinta loogu talagalay Android ee loogu talagalay Samsung Galaxy S7 ee Spain ayaa markii ugu horreysay imaanaysa boosteejooyinka Orange xitaa ka hor noocyada PHE.
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa Mi 5C, oo ah taleefankiisii ​​ugu horreeyay ee ay ku shaqeyso, oo ah Surge S1
Xiaomi wuxuu soo bandhigayaa Mi 5C, oo ah taariikh muhiim u ah taariikhda shirkadda maaddaama ay isku darayso processor-keeda ugu horreeya ee iskeed u sameysay, ee Surge S1
HTC waxaa laga yaabaa inay diyaarsato terminaal cusub oo loo yaqaan 'Edge-terminal'. HTC Edge?
HTC Edge ama HTC Sense Edge, muxuu interface-ka cusub ee adeegsadayaasha HTC na tusayaa? Interface cusub ama casriga casriga loo yaqaan 'Edge-style' cusub?
Xiaomi Redmi 4X cusub ayaa soo ifaya, ha u ogolaato kala duwanaanta soo gelitaanka ee Android, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan qeexitaankeeda farsamo iyo qiimaha rasmiga ah ee lagu bilaabayo.
Waxaan kuu sheegeynaa wax walba oo ku saabsan Xiaomi Redmi 4X, oo ah heer sare oo heer sare ah oo soo gala Android kaas oo u imanaya inuu xukumo suuqa kala duwan ee aasaasiga ah ee Android
Nokia 3310 2017 durba waa xaqiiqo, waxaan kuu sheegeynaa dhammaan faahfaahinta iyo qiimaha soo noqoshada halyeeyga Nokia
Nokia 3310 2017 durba waa xaqiiqo, soo noolaanshaha halyeey nool oo awood u yeeshay inuu iibiyo in ka badan 120 milyan oo terminaal adduunka oo dhan ah.
Nokia 3 oo ah taleefanka gacanta ee casriga ah ee aasaasiga u ah 139 euro iyo damaanad qaadka NOKIA
Nokia waxay soo bandhigeysaa Nokia 3 oo ah heer-gelitaan heer-sare ah oo loogu talagalay isticmaalaha aasaasiga ah ee Android ee aan doonayn inuu ku bixiyo dahabka iyo mooriga Android wanaagsan.
Astaamaha farsamada iyo qiimaha Huawei P10 iyo P10 Plus
Waxaan horeyba uheynay dhamaan qeexitaanada farsamo iyo qiimaha Huawei P10 cusub iyo Huawei P10 Plus oo hada lagu soo bandhigay MWC17 ee magaalada Barcelona.
Waxaan horey u haysanay LG G6 runtuna waxay tahay markan inay nala yaabeen
Waxaan horey u haysanay LG G6 markanna wadamada kaladuwan ee Kuuriya waxay ku tuuraan dhamaan hilibkii dabka saarnaa terminal qurux badan oo leh qiimo sare iyo shaashad cajiib ah
Xiaomi Mi 6 wuxuu ka muuqdaa daadad cusub oo leh sawirro
Sawirro taxane ah oo ka mid ah Xiaomi Mi 6 ayaa muuqda, in kasta oo ay tahay inaad ku qaadatid tweezers maadaama astaamaha Mi uusan ku oollin xagga hore
Samsung Galaxy S8 + Tilmaamaha ayaa la muujiyay
Qeexitaanka Samsung Galaxy S8 + waxaa horay u muujiyay Evan Blass, maalmo un ka hor inta uusan bilaaban MWC 2017.
Samsung hadda waxay dhahdaa ma iibin doonto 'dib loo cusbooneysiiyay' Galaxy Note 7 gudaha Hindiya
Samsung ayaa laga yaabaa in laga tago iyada oo aan lahayn qorshe ay dib ugu isticmaasho Galaxy Note 7 oo ay qorsheyneysay in ay shalay ka soo saarto suuqyada soo baxaya.
Sawirro badan oo sifeysan oo dhab ah oo ah Galaxy S8 oo ah 'shaashad dhan'
Taleefanka 'dhammaan shaashadda' ayaa noqon kara astaamaha ugu badan ee lagu garto ee cusub ee Galaxy S8 marka uu suuqa yaallo oo na tusaya waxa ay Samsung awood u leedahay
Honor V9 wuxuu hadda si rasmi ah ula socdaa shaashadda QHD, 6GB oo RAM ah iyo kamaradaha qaabeynta 3D
Iyada oo kamaradda qaabeynta 3D ay noqon doonto taleefankii ugu horreeyay ee lagu daro tiknoolajiyadan, Honor V9 ayaa maanta looga dhawaaqay Shiinaha.
Sony's Xperia Z5 waxay helayaan cusbooneysiin yar markale
Sony ayaa soo saartay cusbooneysiin yar oo keenta cilad-hagaajinta kiniiniyada Xperia Z5, Z3 + iyo Z4 ee nooca Nougat ah.
Samsung waxay iibin doontaa 'dib loo hagaajiyay' Galaxy Note 7
Samsung horeyba way u ogtahay waxa laga yeelayo kuwa 2,5 milyan ee Galaxy Note 7 ee ay leedahay. Soo celi oo ku iibso Hindiya iyo Vietnam.
Maamuus 5X, falanqeyn iyo ra'yi
Falanqaynta fiidiyowga iyo Isbaanishka Sharafta 5X, oo ah sheeko ku kacaysa 199 euro oo leh astaamo iyo naqshad aad u xiiso badan
HTC X10 waxaa loogu talagalay suuqyada soo baxaya oo leh astaamo iyo sawirro dhowr ah oo aan hadda bixinno si aan kula kulanno.
Xiaomi ayaa ku dhawaaqi doonta 'Pinecone' jabkeeda bishaan
Xiaomi waxay xaflad aad u qaas ah ku yeelan doontaa Febraayo 28 magaalada Beijing markay soo bandhigayso qalabkeeda Pinecone. Tan, waxay ku noqonaysaa mid ku habboon nooca noocan ah
Qiimaha Samsung Galaxy S8 ayaa si khalad ah u dusay. $ 950 iyo $ 1050, yaa siiya intaa ka badan?
Waxaan horeyba u helnay daadad cusub, kiiskan ku saabsan qiimaha suurtagalka ah ee Samsung Galaxy S8, qiimaha raacaya raadadka Google Pixel.
MIUI 8.2, wararka ugu waaweyn iyo boosteejada iyo taariikhaha lagu cusbooneysiin doono OTA
Waxaan kuu sheegeynaa wararka ugu muhiimsan ee MIUI 8.2 keenayo iyo sidoo kale boosteejooyinka laga heli doono cusbooneysiinta OTA iyo sidoo kale taariiqda howlgelinta
Waa la xaqiijiyay, Xiaomi Mi Mix 2 waxay lahaan doontaa xittaa yar yar
Waxaa la xaqiijiyay in Xiaomi Mi Mix 2 ay lahaan doonto xittaa yar yar, si aad u badan oo saamiga shaashadda uu ku fadhiisan doono 93% xagga hore.
Laba taleefan oo casri ah oo heer sare ah oo ka socda LG ayaa ka muuqda Geekbench
Geekbench waa aalad tilmaamaysa oo bixinaysa macluumaad ku saabsan laba alaabood oo heer sare ah oo suurto gal ah oo ka imaanaysa soo saaraha Kuuriya ee LG.
Shaandheeyay sawirro cusub oo ah 'Huawei P10 Plus', oo ah nooca leh gees gees
Huawei P10 Plus wuxuu lahaan karaa waxyaabo badan oo la mid ah Galaxy S8 adoo ku siinaya badhanka hore ee jirka isla markaana ka doorbidaya dhinacyada dhinacyada.
Samsung Galaxy S7 iyo S7 Edge waxay luminayaan 10% madax-bannaanida markay cusbooneysiinayaan Android 7.0 Nougat
Labada Samsung Galaxy S7 iyo Samsung Galaxy S7 Edge labaduba waxay luminayaan 10% batari kadib markay cusboonaysiisay Android 7.0 Nougat
Kuwani waa midabada loo heli karo Huawei P10
Huawei ayaa daabacday fariin ay ku muujineyso seddex midab oo Huawei P10 laga heli doono markii uu suuqa ku dhaco